လုပ်ငန်းသုံးယဉ်, Construction Vehicles ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
အသုံးပြု ပြီး မိုင်
Nearby ဈေးနှုန်း - အနိမ့်ဆုံးမှစ ဈေးနှုန်း - အမြင့်ဆုံးမှစ မိုင်နှုန်း - အနိမ့်ဆုံးမှစ ရက်စွဲပြင်ရန် - အနီးဆုံးမှစ
: ရက်စွဲပြင်ရန် - အနီးဆုံးမှစ
Iveco Mixer Concrete Mixer Tru...
Myanmar Synergy Co.,Ltd.
Red 2016 Iveco Concrete Mixer Truck 9m3 Italy for sale.DimensionLength - 8875 mmWidth - 2500 mmBody Capacity - 9m3WeightVehical Curb Weight	- 15290 KgGVW ...
Iveco New Tracker 2016
White Iveco New Tracker 2016 Italy for sale. DimensionWheelbase - 1875+2375+1430Maximum length - 8447Max Width - 2550Overall Height(Unladen) - 3227WeightG.V.W - 50000Payload - 37000BodyBody Capac...
Iveco Mixer Concrete Mixer Truc...
Iveco Mixer Concrete Mixer Truck 10m3 2016 Italy for sale. DimensionLength - 8875 mmWidth - 2500 mmBody Capacity - 9m3WeightVehical Curb Weight	- 15290 KgGVW ...
Iveco Prime Mover (682 Tracker Head)
White 2016 Iveco Prime Mover Italy for sale. The comfort features include A/C: Front,Power Steering. The safety features include Airbag: Driver. The windows are Power Windows.
ဆောက် လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ
ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းခွင်သုံး ဈေးကွက် ကတော့ ကားဈေးကွက်တွေလို လွယ်ကူပြီး ကြိုက်ရောင်း ကြိုက်ဝယ် ပုံစံမျိုးနဲ့ တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အများအားဖြင့် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ဆွီဒင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ကားတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကြာရှည်ခံမူ၊ ခိုင်ခံမူ၊ အာမခံမူတွေဟာ လုပ်ငန်း တစ်ခု လည်ပတ်ဖို့ အရေးပါတဲ့အတွက် Brand New တွေကိုသာ ၀ယ်ယူလေ့ ရှိပါတယ်။ ကရိန်း မြေတူး ကားကြီးတွေဆို တန်ဖိုးကလည်း မြင့်မားတာမို့ ခဏခဏ ၀ယ်ဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီအတွက် အာမခံမူ ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ ကားတွေကို ၀ယ်ယူကြပါတယ်။ ပုံမှန် နယ်ဖက်နဲ့ မြေသယ်ကားတွေ လောက်ဆိုလျှင်တော့ တရုတ်မြေသယ်ကား၊ ဒန်ပ် ထရပ်ကားတွေက အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရိန်းနဲ့ လမ်းကြိတ်စက် များ
လုပ်ငန်း အကြီးအသေး ပေါ်မူတည်ပြီး ကားမော်ဒယ်၊ တန်ချိန်က အစ ကွဲပါတယ်။ ဥပမာ- ဆွီဒင် ထုတ်တွေဖြစ်တဲ့ ဗယ်ဗို အိခ်ျကဗေတာ ကရိန်း တွေဆို မော်ဒယ် အမျိုးအစား အီစီ ၁၄၀ ကနေ, အီစီ ၂၁၀၊ အီစီ ၃၆၀ အစရှိသဖြင့် အီစီ ၇၀၀ ထိကို ရှိပါတယ်။ ပုံမှန် ဆောက်လုပ်ရေး၊ တိုက်တာအဆောက်အအုံတွေ တူးဖော် သယ်ယူမူရေးတွေမှာဆိုလျှင် အီစီ ၂၁၀ လောက်ဆို အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက တန်အားဖြင့် ၂၀ ရှိပြီး ဒီဇယ် အင်ဂျင်၊ မန်နျူးယယ်၊ ဆလင်ဒါ (၆) လုံး ပါ မြင်းကောင်ရေ ၁၅၀ လွှတ်နိင်တဲ့ ဗယ်ဗို အင်ဂျင်ကို သုံးပါတယ်။ တန်အားတွေကို မူတည်ပြီး သယ်ယူနိင်တဲ့နှုန်း အလုပ်ပြီးမြောက် မူနှုန်းမှာ ကွာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဆလင်ဒါ (၆) လုံးရှိပါတယ်။ ဆလင်ဒါ (၄) လုံးရှိပါတယ်။ ၂၀၁၄ ထုတ် ယာဉ်တွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗယ်ဗို ကွန်ပတ်တာ လို့ခေါ်တဲ့ လမ်းကြိတ်စက်အမျိုးအစားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် သုံးကားဖြစ်လို့ သူလည်း ဂီယာ မန်နျူးယယ်နဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းကောင်ရေက ၄၀၀ နီးပါးလောက် ထုတ်နိင်ပါတယ်။ ဟီတာချီ တံဆိပ်တွေကိုလည်းတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး မြေသယ် မြေချကားများ
ဂျပန်ကားတွေထဲမှာ ဆိုလျှင် နစ်ဆန်း ယူဒီ တို့လိုကားတွေကို သုံးပါတယ်။ ပုံမှန် ဆောက်လုပ်ရေးတွေကတော့ တရုတ်ပြည်ထုတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ လီဖင်န်၊ ဒေါင်းဖင်န် စကတ် စတဲ့ ထရပ်တွေကို သုံးပါတယ်။ လီဖင်န်ထဲမှာမှ ခေါင်းတို ခေါင်း ရှည်ရှိပါတယ်။တန်တွေလည်း ကွဲသလို ဈေးနှုန်းပေါ် မူတည်ပြီး ကားရဲ့ အင်ဂျင် ခိုင်ခံမူကအစ ကွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးနိင်လိုက်ပါ သူတွေ အတွက် ဒရိုက်ဘာခန်းမှာတော့ (၃) ယောက် လိုက်ပါနိင်ပါတယ်။ ဒီဇယ် ၊ မန်နျူးယယ်၊ ၄၁၀၀ စီစီ ရှိတဲ့ အင်ဂျင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒန်ပ် အတင်အချ ထရပ်တွေ ဖြစ်လို့ ဟိုက်ဒရေလစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဗယ်ဗို ကရိန်းတွေ အတွက်ကတော့ တန် ၂၀ ရှိတဲ့ အီစီ ၂၁၀ ဆိုလျှင် ဒေါ်လာ ၁၃၀,၀၀၀ လောက် ဈေးရှိပါတယ်။ အီစီ ၂၇၀ ကရိန်းကြီးတွေဆိုလျှင် ဒေါ်လာ ၁၈၀,၀၀၀ ဈေးရှိပါတယ်။ လီဖင်န် ခေါင်းရှည်တွေ အတွက်ဆို ကျပ်သိန်း (၁၁၅)၊ (၁၁၇ ) အစားစား ရှိပါတယ်။ လီဖင်န် ခေါင်းတိုမှာက အမျိုးအစား ပိုများပြီး ဈေးနှုန်းက (၁၃၀) ကနေ ၂၀၀ အထိ ရှိပါတယ်။ ဈေးက ကားရဲ့ အရည်အသွေး၊ ခိုင်ခံမုတို့ အပေါ်မှာ မူတည် ပြီး ကွဲသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လီဖင်န် စကတ်တွေအတွက် လုပ်ငန်း သုံး (၆) ပေါက်တန်ကား ဈေးနှုန်း မှာ ကျပ်သိန်း (၁၃၃) ခန့်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး (၈) ပေါက်တန်ကားကတော့ ကျပ်သိန်း (၁၅၃) သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။